Singenza njani ukusebenzisa stepper motor - China Changzhou thathi Motor
ulawulo motor Stepper sisixhobo olawula sikhundla, isantya kunye torque mechanical drive. It yenzelwe ulawulo isindululo iinjini zombane. It has transmission esizenzekelayo lesandla zokuqala bokumisa injini, kunye nokukhethwa hlengiso nesantya.
Kwakhona kulindeleke ukuba ukhethe nokuba phambili okanye ukubuyisela ukujikeleza nxamnye nomthwalo kunye iziphene, uze ulungise torque. motor nganye yombane lixhotyiswe umlawuli ukuba inemisebenzi ezahlukeneyo kunye neempawu. Sehla ulawulo motor kwakhona ukunceda ukukhusela elikhulu iinjini kufuneka ukucima kombane okanye ngaphezulu imeko yangoku. Oku kwenziwa kunye nokhuseleko omninzi relay okanye lobushushu wakuqonda irileyi. Iifyuzi kunye miyalezo zeesekethe kwakhona luncedo zokuzikhusela phezu ngoku. abaqhubi motor oluzenzekelayo unikwa itshintshela umda ukukhusela umatshini.
Ezinye nabaqondisi motor entsonkothileyo asetyenziselwa ukulawula isantya kwaye torque Motors enxulumene. Xa ulawulo evaliweyo-ngokwenzekayo, omnye umlawuli ivelisa ndawo echanileyo kwinani injini a lathe-kulawulwa. Le isilawuli motor izikhundla ngokuchanekileyo isixhobo ukusika ngokubhekiselele kwiprofayile pre-ehlelwe. Ihlawula kwakhona ukuba iimeko umthwalo ezahlukeneyo kunye nemikhosi sisiphazamiso ukunceda zigcine indawo sixhobo.
Motor nabaqondisi zisekelwe yintoni kwasala ukuyenza. Kukho ulawulo motor manual, ulawulo motor oluzenzekelayo nolawulo isithuthi mgama. Kuxhomekeka umenzi, ulawulo motor kunokuba kuphela sisiqalo kwaye ayeke. Kodwa kukho abaqhubi ezininzi ezilawula i-injini kunye iimpawu ezininzi. An ulawulo motor Umbane zihlelwe ngendlela uhlobo kweemoto ukuba aqhutyelwe okanye ilawulwe. Oku eshukumayo ulawulo servo, Motors inyathelo, alternating current yangoku okanye AC okanye DC ibrashi okanye brushless umazibuthe DC ngokusisigxina.